Ahoana ny fomba hisafidianana ny GPS Tracking System tsara indrindra ho an'ny zanakao manokana? | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autism / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Tags: autiste Autism Kid GPS Tracker Global toerany System Ankizy Tracker Watch
Ahoana ny fisafidianana ny rafitra GPS manara-maso tsara indrindra ho an'ny zanaka mila anao manokana:
Lasa fahita any amin'ny zaza ny Autism efa tao anatin'ny taona vitsivitsy. Ny ankizy manana autisme dia mahatsiaro sarotra be amin'ny fifandraisana. Maneho fihetsika hafahafa izy ireo isaky ny mandeha. Tsy azontsika atao ny mamina mialoha ny fihetsik'izy ireo. Ho an'ireo ankizy mijaly amin'ny Autism, ny fampiasana GPS tracker dia filana antra fa tsy haitraitra be. Araka ny hitantsika dia ny ankizy manana ny Autism matetika dia manana fiovana amin'ny toetra ary mandehandeha eny ivelan'ny trano izy ireo. Ho an'ireo ankizy toa an'io, ny GPS no zavatra tsara indrindra. Na aiza na aiza alehan'ireo zaza ireo dia hanana ny toerana misy azy ireo ny ray aman-dreniny. Raha ny rafitra tsara indrindra momba ny GPS Tracking System dia tsy maintsy manana toetra maro izy io ary tsy maintsy ho mpanentana rehetra.
Tena mila mpitety manokana ho an'ny ankizy manana Autism ve isika?
Ny Autisma dia misy akony lehibe amin'ny ankizy. Afaka manova tanteraka ny fihetsik'izy ireo. Tena mahaliana ny ankizy toy izany. Tsy misy mpitsikilo manokana ampiasaina ho an'ireo ankizy manana autism. Izy ireo dia azo zahana miaraka amin'ny GPS trackers tsotra. Raha ny marina dia misy tombony be amin'izy ireo. Ny olana eto dia tsy maintsy tsy takatry ny mpanara-maso ny zaza. Sao dia tsy matahotra azy izy.
Zavatra tokony hodinihina alohan'ny hividianana GPS Tracker:
Ankehitriny andao hojerentsika ny zavatra tokony hodinihintsika alohan'ny hividianana GPS Tracking System tsara:
Inona no tadiavin'ny olona iray?
Tokony ho fantatry ny olona aloha ny tanjon'ny fametrahana ny GPS. Toy ny tsy maintsy fantany izay zavatra tadiaviny. Avy eo dia azontsika atao ny manasokajy ny karazana fitaovana ho azy.
Raha te hanara-maso ny fiarany izy. Avy eo dia tokony ho matanjaka ara-batana sy henjana ny fitaovana. Tsy hanana olan'ny bateria izany satria izy dia hampifandraisina mivantana amin'ny batteran'ny fiara. Tsy maintsy manana tohana magnetika mafy koa izy io ka mety hipetaka amin'ny vatan'ny fiara. Tsy maintsy arindra koa izy io ka tsy mety diso ny lalana ao amin'ny toerana lavitra. Tsy tokony ho hackable koa io.
Fa ny tena mampanahy anay eto dia ny zaza manana autis. Ny tracker dia tsy tokony hisy fitaovana tsara amin'ny fampiasa izay hanomezana fikarakarana ny zaza. Ary manamaivana ny fihenjanana mahazo ny ray aman-dreny koa izany.
Raha misy olona te-hanaraka ny zanany dia tsy maintsy ho kely ny mpanenjika. Noho izany, ny olona iray dia afaka hitafy mora foana azy. Tsy maintsy arindra koa izany mba hitaterana matetika. Ny fitaovana kely dia mazàna manana bateria malemy ary misy fotoana kely an'ny bateria. Ny fotoana fatran'ny bateria dia tokony ho tsara. Tokony hisy bokotra SOS ihany koa izay mandefa hafatra vonjy maika ho an'ny telefaon'ireo ray aman-dreny. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny raharaha biby fiompy amin'ny fampidirana vatana marefo sy ny fanesorana ny bokotra SOS.
Tsy maintsy atao manokana arakaraka ny tiana ny ankizy mba hahafahan'ilay zaza manomboka maniry io zavatra io. Ary hiambina azy foana izany. Ity dia mety ho an'ny ray aman-dreny sy ny zaza. Mandritra izany fotoana izany, dia ho tena tsara ho an'ny orinasa.
Ny vidin'ny Devoly GPS:
Ny zava-dehibe manaraka izay tokony ho ao an-tsaina dia ny vidin'ny fitaovana GPS. Tokony ho mora vidy ary miaraka amin'izay koa, tokony hanome asa tsara indrindra koa izy io. Manan-danja betsaka ihany koa ny orinasa. Tokony hanohana ny mpanjifany izy io ary hanome fahafaham-po sahaza azy ireo. Matetika, ny olona iray dia mila mandoa $ 50- $ 100 amin'ny fitaovana GPS ary $ 20- $ 40 ho an'ny fisoratana anarana. Ny orinasa dia tsy tokony hamatotra ny mpividy amin'ny fifanarahana. Ny mpampiasa dia tokony hamarana mora foana ny famandrihana araka ny sitrapony.
Fandrefana amin'ny bateria:
Ny fotoanan'ny batterie dia toa tsy misy lanjany amin'ny fividianana ny fitaovana GPS tsara indrindra. Raha hitantsika mazava kosa anefa dia azontsika fantarina ny maha-zava-dehibe an'izany zavatra izany. Aoka hatao hoe misy ankizy mivezivezy any ivelan'ny tranony. Afaka mahita azy amin'ny GPS ny ray aman-dreniny. Saingy mihintsana ny rafitra rehefa mihamalemy tampoka ny baterin'ny mpizara. Koa inona no hampiasana fitaovana toy izany. Noho izany, ny olona iray dia tsy maintsy mieritreritra io lafin-javatra io ary tokony hangataka fitaovana iray manana fihenan-batana mendrika izy io. Ny fananana bateria be dia be dia tsy tokony ho olana ho an'ny mpampiasa fa tsy maintsy mahatsiaro fa tokony haharitra maharitra sy mora miova ny bateria.
Ny Tracker dia tsy maintsy atao maivana lanja. Izany dia vokatry ny anton'ny ankizy. Raha mavesatra ny tracker dia ho olana eo ilay zaza hitondra. Izany dia mety hahatonga ny zaza very koa amin'ilay tracker. Olana lehibe iray ho an'ny ray aman-dreny koa izany. Tsy azon'izy ireo atao ny manara-maso toy izao ny zanany. Noho izany, ny mpanenjika dia tsy maintsy haingam-pandeha maivana mba hahafahana miraikitra amin'ny sandry na hatramin'ny sombin'ilay zaza.
Fitaovana hack Proof:
Sahala amin'ny olana amin'ny batterie ihany koa dia toa tsy dia manahirana ihany koa ity olana ity. Saingy mety hanome olana lehibe ho an'ny mpampiasa izany. Tokony ho hack-porofo ilay fitaovana. Aoka hatao hoe misy fitaovana GPS miraikitra amin'ny fiara ary aringina izy io. Amin'izay dia tsy azo antoka ny fametrahana ilay fiara eo amin'ny toerana rehetra raha toa ka hampahafantatra ny toerana misy azy ireo hackers ny GPS Tracker. Ity zavatra ity dia mampitombo ny fandrahonana amin'ny halatra amin'ny halatra. Ny fitsaboana tokana ho an'ny mpampiasa dia ny manakana ny GPS Tracker vetivety izay tsy misy ilana azy intsony. Noho izany, ny mpampiasa dia tokony hiantoka fa ny GPS tracker dia hack-porofo.
6309 Total Views 8 Views Today